တွေ့ဆုံဂျက် RAMSAY: ဒုတိယနှစ်တွင်ဂေါ်ဒွန် RAMSAY ရဲ့သားနှင့် EXETER UNI - သတင်း
တွေ့ဆုံဂျက် Ramsay: ဒုတိယနှစ်တွင်ဂေါ်ဒွန် Ramsay ရဲ့သားနှင့် Exeter Uni
ဂေါ်ဒွန်ရမ်ဆေးသည်သူ၏ကျိန်ဆိုမှုကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးသူ၏ချက်ပြုတ်မှုတွင် Uni တွင်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိသည်။
ဂေါ်ဒွန်၏ ၁၈ နှစ်အရွယ်အမွှာ Jack and Holly သည် Exeter နှင့် Ravensbourne တွင်ရှိပြီးဗြိတိန်တွင် ၁၁ ခုမြောက်အခက်ခဲဆုံးယူနီဖောင်းဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီဂျက် & Holly ပြု! Ramsay တက္ကသိုလ်မှနောက်ထပ်2ပိုပြီး # Exxeter #ravensbourne ABB ABC ABC ABC မှာအရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်၊ အရမ်းခက်ခဲတဲ့နှစ်မှာအခြားကျောင်းသားအားလုံးကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ညစာစားပွဲကကျွန်ုပ်အပေါ်ကျသည်။ pic.twitter.com/rktNRzH2lW
- Gordon Ramsay (@GordonRamsay) သြဂုတ်လ 16, 2018
Jack Ramsay ကဘယ်သူလဲ။
သူသည် Gordon Ramsay ၏တစ် ဦး တည်းသောသားဖြစ်ပြီးသူနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရုပ်မြင်သံကြားတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူဟာသူ့အဖေနဲ့တူညီနေပြီး Exeter ကျောင်းသားတော်တော်များများကလည်းသူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုမှာသေချာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက် @ _jackrams3y_ @mazegrill #steaknight နှင့်ညစာစားပါမည်
မျှဝေသည် ဂေါ်ဒွန် Ramsay 12:35 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 4, 2018 ရက်တွင် (@gordongram)
ဂျက် Ramsay ရဲ့ Instagram ကဘာလဲ?
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 4:45 pm တွင် PDT မှာဇွန် 25, 2016 တွင်
သူ့အဖေနှင့်မတူသည်မှာ သူကို 4.6 သန်း Instagram ကိုနောက်လိုက်ရှိပါတယ် , ဂျက်ရဲ့နောက်လိုက် 263k အမှတ်အသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူက Insta နာမည်ကြီးနေတုန်းပဲ။ သူဟာအားကစား၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းနဲ့ဒရာမာအကြောင်းရေးသားလေ့ရှိတာကြောင့်သူဟာပုံမှန်အတိုင်းသာမန်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Uni ကိုသွားဖို့သွားနေပါတယ်။ သူ့အဖေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျော်ကြားပြီးကြွယ်ဝသူပါ။
မယုံနိုင်စရာနေ့ - ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့်အံ့သြဖွယ်ထောက်ခံမှု ?? ပြီးသွားတဲ့လူတိုင်းကိုအကြီးအကျယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒါကသင် @greatormondst နဲ့မင်းရဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်အားလုံးအတွက်ပဲ။ ?
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 2:16 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2018 ပေါ်မှာ
Gordon Ramsay ၏သမီးအကြီးဆုံး Megan သည် Oxford Brookes သို့သွားပြီးစိတ်ပညာလေ့လာခဲ့သည်။
စုစုပေါင်း Ramsay ကလေးလေးယောက်ရှိသည်။ Megan, Jack, Holly နှင့် Tilly, 16 နှစ်တွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ CBBC အစီအစဉ်တွင်အတူတူပင်ပေါ်လာသည်။
မျှဝေသည် Megan Ramsay (@megan__ramsay) ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တွင်နံနက် ၅:၄၂ နာရီ၊
ဂျက်နှင့်သူ၏ဖခင်တို့သည်အလွန်နီးကပ်စွာရှိပြီး Instagram တွင်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်များအဖြစ်အမြဲရည်ညွှန်းကြသည်
ပျော်ရွှင်တဲ့ဖခင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်လား။ သငျသညျနေ့တိုင်း x ကိုငါ့ကိုလာအောင်နှိုးဆွ
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 6:51 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 19, 2016 တွင်
အလေးအနက်ထားဒီအခိုက်ဖြစ်ပျက်မယုံနိုင်သလဲ အကြီးအကျယ်ဂုဏ်ပြု AJ ?? အံ့သြဖွယ်ရန်ပွဲ ??
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 4:42 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 25, 2016 တွင်
⚫️မိသားစုလား #Pueri #DCTID #UTD #NationalFinals
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 11:20 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 29, 2017 ရက်တွင်
@spinvillain + @shapewithangela စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနွေရာသီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး! သင်တို့ကိုမကြာမီတွေ့မြင်ပါ။ X
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 10:34 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 30, 2014 တွင်
'ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုသူတို့ရကြလိမ့်မယ်။ ' - Captain Plume၊ စုဆောင်းရေးအရာရှိ ?? ‍♀️
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 8:20 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 2017 တွင်
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 9:10 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 2016 တွင်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများကြီး kiddo ?? နင့်ကိုငါမုန်းလို့မရဘူး။
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 10:24 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 9, 2017 ရက်တွင်
BAFTAs မှာကြီးတဲ့ညလား ကံမကောင်းစွာဖြင့်အနိုင်ရခြင်းနှင့်အတူလမ်းမလျှောက်နိုင်သော်လည်း @ tillyramsay01 သည်မုန်တိုင်းထန်ခြင်းကို ဆက်လက်၍ အချိန်များစွာရပြီးသူနှင့်အတူစည်းလုံးမှုဆက်ရှိနေလိမ့်မည်။ အများကြီးပိုပြီးမကြာမီပြန်လာပါလိမ့်မယ်! ??
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု _jackrams3y_ 2:57 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 20, 2016 တွင်
သူကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ Bloke လိုပဲ၊ သူချက်ပြုတ်ရတာတကယ်ကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်သူနဲ့သင်နဲ့ပိုရင်းနှီးအောင်သင်နဲ့သူနဲ့အိမ်တစ်အိမ်မျှဝေရမယ်။